’Smụaka Akwụkwọ Printing Plant-BPC(Bookprintingchina.com)-Blog-Book Mbipụta China
’Smụaka Akwụkwọ Printing Plant-BPC(Bookprintingchina.com)
Oge: 2018-08-22 Hits: 252
Mgbe gị na ụmụ gị kesara akwụkwọ eserese a, will you think of the efforts made by BPC's Factory for your warmth at this moment?
Naa, ya na mmepe nke mmuta izizi n’uwa, children's books printing na-ewu ewu karịa. Ọtụtụ ndị nne na nna na ụmụaka na-enwe obi ụtọ inweta akwụkwọ ezigbo foto. BPC Printing na-agba mbọ ịmepụta ezigbo ahụmịhe ọgụgụ maka ụmụaka. Anyị na-ahọrọ mmanụ na-ebi akwụkwọ dị mma na gburugburu ebe obibi&akwukwo iji jide n'aka na aguru umuaka n'udo.
Kedu ka esi bụrụ akwụkwọ ụmụaka na BPC Printing Factory?
Na mbụ, -ji pịa imewe typesetting. Na BPC Mbipụta,Ọrụ Mbipụta, anyị bụ ndị ọma na-enye ndị na-emepụta kwesịrị ekwesị agba aro maka ibi akwụkwọ, iji jikọta echiche nke ndị na-emepụta ihe, dozie nsogbu ndị ị nwetara na usoro mbipụta akwụkwọ gara aga tupu oge eruo ma zere ụzọ. Mee agba nke mbụ nke mbọ maka ụbọchị a kara aka.
Mgbe ahụ bụ imekọ ihe ọnụ nke ígwè obibi akwụkwọ, peeji nke ọ bụla na-ekpebi akwụkwọ, na usoro nke imeghari igwe ikpe biri ebi, ndị na-emepụta ihe nwere ike ịga na saịtị obibi akwụkwọ iji gbanwee mgbanwe nbipụta na nsonaazụ n'ezie, dị ka n'ezie mmetụta nke ukpụhọde-ebi akwụkwọ na agba kenha atụmatụ iji nweta ihe kacha mma na-ebi akwụkwọ na agba mmetụta ndị ahịa chọrọ.
N'ikpeazụ, post-pịa nkịtị usoro, ọ bụghị naanị na mmalite ebe obibi akwụkwọ, anyị nwere usoro nnwale zuru oke, anyị na-melite sample ebe ọ bụla post-pịa usoro, iji hụ na nnukwu ngwongwo na-apụta n'otu oge nweta ezigbo akwụkwọ akwụkwọ ndị mara mma n'aka ndị ahịa.
Maka ama ndi ozo banyere BPC Book Printer, biko attentionaa ntị na www.bookprintingchina.com, ma ọ bụ mee nhọpụta ozugbo ịhụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na sales@bookprintingchina.com.
Na Mbụ Page : Etu ị ga - esi họrọ igwe nrụpụta akwụkwọ dị ike na ntụkwasị obi site na ọtụtụ ụlọ ọrụ na - ebi akwụkwọ china?
Next Page : BPC(Bookprintingchina.com)-22 ọtụtụ afọ nke akwụkwọ ọgụgụ dị nkọ